ၾကိဳ ့ထိုးျခင္း ေျပေပ်ာက္ေစမယ့္ နည္းလမ္း(၅) မ်ိဴးကိုေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » ၾကိဳ ့ထိုးျခင္း ေျပေပ်ာက္ေစမယ့္ နည္းလမ္း(၅) မ်ိဴးကိုေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….
ၾကိဳ ့ထိုးျခင္း ေျပေပ်ာက္ေစမယ့္ နည္းလမ္း(၅) မ်ိဴးကိုေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….
အစာခြလေမျးကွောငျးပေါျမှာ ပွသနာတစျခုခုရှိနပွေီဖွစျေွ ကာငျးကို ဦးနှောကျက ဝမျးဗိုကျသို့“ကွို ့ထိုးခွငျး” ဖွငျ့ အခကြျပွလေ့ ရှိုတယျလို့အမရေိကနျ ဆေးသုတသေီမြားကဆိုပါတယျ။
လေ့လာစမျးစစျမှုမြားအရ၊ ကလေးငယျမြားတှငျ မကွာခဏ ကွို ့ထိုး လေ ့ရှိကွပွီး၊ အရှယျရောကျသူမြားမှာတော့ အနညျးဆုံး တစျနှစျလြှငျ ၃-ကွိမျ မြှ ကွို ့ထိုးကွပါတယျတဲ့။ ကွို ့ထိုးခွငျးဖွငျ့ အသကျမတိုစနေိုငျပါ။ မြားသောအားဖွငျ့ ကွို ့ထိုးခွငျးက မိနစျျအနညျးငယျအတှငျး သူ ့အလိုလို ပြောကျသှား စသေောျလဲ၊
တခါတရံမှာတော့ တောျတောျနဲ ့မပြောကျလို ့စိတျကသိကအောကျ ဖွစျစပေါတယျ။ အောကျပါ နညျးလမျးမြားက ကွို ့ထိုးခွငျးကို ပွပြေောကျစေ၍့၊ လိုအပျသလို လေ့လာမှတျသားအသုံးခနြိုငျပါ တယျ။
(၁) သကွား(သို ့မဟုတျ)အိုဗာတငျးအမှုနျ ့(သို ့မဟုတျ)ခြောကလကျမှုနျ ့၁-ဇှနျးစာ ပမာဏကို လြှှာပေါျတငျ၍၊ အာခါငျနှငျ ့လြှာ ပှတျတိုကျမြိုခပြေးခွငျးက အစာလပွှေနျကို လှုပျရှားအောငျလှုံ ့ဆောျ ပေးရာရောကျကာ ကွို ့ထိုးပြောကျသှားစပေါတယျ။
(၂) နားနှစျဘကျထဲ လကျခြောငျးထဲ့ပေးခွငျးက အကွားအာရုံကွောကို ခတေ်တဆိုငျးငံ့စကော ကွို ့ထိုးခွငျးကို အဆုံးသတျသှား စကွေောငျး Discovery Fit & Health ဟုအမညျရသော အမရေိကနျဆေးဂြာနယျတှငျဖောျွ ပထားပါတယျ။ (နားအတှငျးထဲအထိ လကျခြောငျးထိုးထဲ့ပေးဖို့မလိုအပျပါ)
(၃) ကွို ့ထိုးနသေူကို မထငျမှတျသောစကားဖွငျ့ အံံသွစိတျတိုအောငျပွောပေးခွ ငျးဖွငျ့ ကွို ့ထိုးခွငျးကို ပွပြေောကျသှား စပေါ တယျ။
(၄) ကွို ့ထိုးနစေဉျ ကွားဖွတျပွီး သောကျရကေို ဂလု..ဂလု မြိုခခြွငျး (သို ့မဟုတျ) ပလုပျကငြျးခွငျးတို ့က အာရုံကွော အဖှဲ ့အစညျးကို အပွောငျးအလဲ သဘောမြိုးဖွစျသှားစပေါတယျ။
(၅) လြှှာကို ဆတျခနဲဆှဲထုတျခွငျးကလညျး ကွို ့ထိုးပြောကျစတေဲ့ နညျးလမျးပါဘဲ။